. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: May 2012
ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည် - ၁
မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်း (ဘက ကျောင်း) တွေဆီ သွားရောက် လေ့လာ လည်ပတ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်လည် မျှဝေချင်ပါတယ် .. ဘကကျောင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ မူလတန်းလွန် စာသင်ကျောင်းတွေ မြန်မာပြည် အနှံအပြားမှာ တော်တော်လေး များနေပါပြီ .. အဲဒီကျောင်းတွေက မူလတန်းကနေ ၇တန်းထိ စာသင်ကြား ပြသပေးပါတယ် .. ၈တန်းကနေ စပြီး အပြင်ကျောင်းကို သွားရောက် သင်ကြားရပါတယ် .. ဘက ကျောင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပေမယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာ ပညာသင်ကြားရတယ်ဆိုပေမယ့် သင်ကြားသူရော လှူဒါန်းသူတွေမှာပါ အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်က လူမျိုးစုံ ဘာသာအစုံ က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်ပါတယ် .. ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆိုသလိုပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထူမတ် အနီးနား လက်လှမ်းမှီရာ ဆွဲခေါ်ကူညီ ရတာပါပဲ ..
မိုးခါး ခု ပြောပြမယ့် ကျောင်းလေးအကြောင်း မပြောခင် အဖွဲ့တခုအကြောင်း အရင်စပြောချင်ပါတယ် .. ကုသိုလ်လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့လေးဟာ ၂၀၀၈ နာဂစ်နောက်ပိုင်းမှာ ပညာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် .. ၂၀၀၈မှစပြီး ခုချိန်ထိတိုင် နှစ်ရှည်စီမံကိန်းနဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းစရိတ် ထောက်ပံ့နေခဲ့ပါတယ် .. အဲဒီအဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကျမတို့ နီးစပ်ရာမောင်နှမတွေ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ကလေးတွေ ကျောင်းစရိတ် ထောက်ပံ့ခဲ့တာဟာလည်း ၃နှစ်တိုင် ရှိခဲ့ပါပြီ .. အလှူခံပို့စ်လည်း ရေးဖြစ်ပါတယ်နော် .. ခုလည်း နီးနေပါပြီလို့ ကြော်ငြာဝင်ချင်ပါတယ် .. :D ခုနှစ်မှာတော့ မိုးခါးက မန်ဘာအနေနဲ့ နိုင်သလောက် ကူညီပေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ် .. ပြီးတော့ ကုသိုလ်အဖွဲ့က အစ်မတွေရဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်နဲ့ မိုးခါး ပြည်တော်ပြန်ချိန်ဟာ တူညီတိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပြီး ဘကကျောင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရောက်ရှိဖို့ အခွင့်ဖန်လာခဲ့ပါတယ် .. အမှတ်ရစရာ ပျော်ရွှင်စရာ ခရီးတခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. အဲ ပင်လည်း နဲနဲပင်ပန်းပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အပျော်က ပိုပါတယ်လေ ..း)
အရင်နှစ် ၂၀၁၁ စာသင်နှစ်မှာ ကုသိုလ်အဖွဲ့နဲ့ Lotus အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကလေးတွေဆီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ် .. Lotus အဖွဲ့က မောင်နှမတွေက ကူညီပြီး ကလေးတွေဆီ ကျောင်းစရိတ်ရောက်အောင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် .. အဲဒီအတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းပါတယ် .. သွားရတဲ့ခရီးတွေက ရေတတန် ကုန်းတတန်နဲ့ တချို့နေရာတွေမှာ အတော်လေး ခက်ခဲ ပင်ပန်းပါတယ် .. လမ်းခရီးအနေနဲ့ တိုသော်ငြား သွားလာရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် လူတွေ ပိုပင်ပန်းရတာပါ .. ဥပမာ မိုးခါးတို့ သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခရီးတခုဖြစ်တဲ့ ကွမ်းခြံကုန်းဘက်ဆိုရင် ကားလမ်းနဲ့ သဘောင်္လမ်း ၂လမ်းရှိပါတယ် .. အသွားတုန်းက သဘောင်္လမ်းဆိုရင် (သဘောင်္လို့ ဆိုပေမယ့် မိသားစုပိုင် သဘောင်္ အသေးစားကလေးပါ .. နောက်ဆက်တွဲတွေမှာ မြင်ရပါမယ် ..) မနက်ကို ၉နာရီ ကျောက်တန်းရေလည်ဘုရားနားက ဆိပ်မှာ စထွက်ပါတယ် .. ဒါဟာလည်း ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး .. ၉နာရီရောက်ပြီး ၁၀နာရီမှ ထွက်မယ်ဆိုတော့ ထိုင်စောင့်ရတာမျိုးပါ .. ထွက်လာပြီး ၂နာရီ ၃နာရီလောက်စီးပြီးတော့ သွားလိုတဲ့ ရွာနဲ့ ၂ရွာအကွာကို သဘောင်္ဆိုက်ပါတယ် .. အဲဒီနေရာကနေ ဘကကျောင်းကို နာရီဝက် ဆိုင်ကယ်စီးရပါတယ် .. ဒါဟာလည်း လမ်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူး .. လယ်ကွင်းတွေ ကြားကပါ .. ရောက်ပီး ပေးစရာရှိတာပေး ပြန်လို့ရမယ် မထင်ပါနဲ့ .. သဘောင်္နဲ့ ပြန်မယ်ဆို ညဘက် ၂နာရီအရောက် လှေဆိပ်ဆင်းရပြီး ကားနဲ့ဆိုရင်တော့ ည ၁နာရီ ၂နာရီမှာ ထွက်တဲ့ ဟိုင်းလက် ကားလေးတွေနဲ့ ဖြစ်သလို အဆင်ပြေသလို ပြန်လိုက်ကြရတာပါ .. ရန်ကုန်ပြန်ဝင်ချိန်ကတော့ မနက် ၆နာရီ ၇နာရီပါ .. အကယ်၍ အဲ့ဒီအချိန် မိုးရွာခဲ့ရင် ကားမထွက်ပါဘူးလို့လည်း သိခဲ့ရပါတယ် .. အဲလို အခက်ခဲတွေ ကြားက ကူညီပြီး ကလေးတွေ အဆင်ပြေဖို့ အခက်အခဲတွေ ကြားက ကြိုးစားပေးနေတဲ့ မောင်နှမများအားလုံးရဲ့ နေရာကနေ ကိုယ်ချင်းစာနိုင်အောင်လို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက် ခံစားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ရှင် .. :D
ခရီးစဉ် စပါပြီ ..
ပထမဆုံး မိုးခါးတို့ အဖွဲ့တွေ ၄-၅-၂၀၁၂ ရက်မှာ စတင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ် .. နောက်ရက် ၅-၅-၂၀၁၁ နေ့လည် ၁၂နာရီမှာ အဖွဲ့တွေဆုံပြီး လှိုင်သာယာမှာရှိတဲ့ အောင်ဇေယျာမင်း ဘကကျောင်းကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ် .. အဲဒီမှာ ကလေးပေါင်း ၃၀၀ ၄၀၀ လောက် ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား နေထိုင်ကြပါတယ် .. နို့စို့အရွယ်ကနေ ၁၀တန်းထိ ကျောင်းသား/သူလေးတွေ ရှိကြပါတယ် ..
ကျောင်းနံရံတွင် တွေ့ရသော ပုံတပုံ .. ပုံမှာမြင်ရတဲ့ ဘုန်းဘုန်းက ကိုယ်တိုင်တောင် နို့စို့ကလေးကို ထိန်းမယ်ဆိုပြီး ထိန်းဘူးပါတယ်တဲ့ .. ၃ ၄ရက်နေတော့ ညစဉ် နို့ဘူးဖျော် ကလေးသိပ်နဲ့ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး အနီးနားက နို့ထိန်းတွေဆီ အပ်ပြီး ထိန်းခိုင်းရပါသတဲ့ .. သွေးမတော်သားမစပ် ထားနိုင်ခဲတဲ့ မေတ္တာပါပဲ ..
ကုသိုလ် Lotus အဖွဲ့ နှင့် ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ထားသော ကလေးငယ်များ အမှတ်တရ (တချို့ကလေးတွေက ကျောင်းပိတ်ချိန် နေရပ်ပြန်နေတဲ့အတွက် လူစုံ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး)
နံရံပေါ်မှာ ရုပ်ပုံ တခု
အဆောင်သစ်အတွက် ကိုရင် နှင့် ဦးဇင်းများ ကိုယ်တိုင် လုပ်အားပေးနေကြပုံ .. ဆရာတော်ပြောပြချက်အရ အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းကို အင်ဂျင်နီယာတဦးက ကူညီ ဆွဲပေးပြီး ဦးဇင်းနဲ့ ကိုယ်ရင်တွေကိုယ်တိုင် ဆောက်လုပ်နေပါတယ်တဲ့ .. တကယ်လဲ တွေ့တာ ဦးဇင်းနဲ့ ကိုရင်တွေပါပဲ .. (အလုပ်ကြမ်းတွေ လုပ်ပြီး ညကျ ဗိုက်မဆာကြဘူးလား မသိဘူးလို့ ရှာရှာကြံကြံ တွေးမိပါသေးတယ်)
အဖွဲ့ ရောက်ရှိချိန်မှာ ၉တန်းနှစ် အတန်းတက်ရောက်ဖို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ ၉တန်း ၁၀တန်း ကလေးများကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ် .. ကလေးအချို့နဲ့လည်း စကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. အောက်မှပုံကတော့ ၉တန်း နှင့် ၁၀တန်း ကလေးငယ်များ နေထိုင်ရာ အဆောင် ဖြစ်ပါတယ် ..
၉တန်း ၁၀တန်း ကလေးများ နေထိုင်ရာ အဆောင်
၉တန်း ၁၀တန်း မိန်းကလေးဆောင်အတွင်းဘက်
ကျောင်းရှိ ကလေးငယ်တွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဲဒီကျောင်းလေးမှာ လာရောက် စုဝေးနေခဲ့ပါတယ် .. ကလေးတိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတာကို စကားပြောရင်း သိခဲ့ရပါတယ် .. အသံသွင်းထား ဗီဒီယိုရိုက်ထားပေမယ့် အက်ဒစ်မလုပ်ရသေးလို့ပါ .. :D
ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲ မေးတော့ တချို့က ဆရာဝန် တချို့က အင်ဂျင်နီယာ တချို့က စစ်ဗိုလ် စသဖြင့် ဖြေကြတာများပါတယ် .. ထူးထူးခြားခြား သီလရှင်ဝတ်နဲ့ ဆရာလေးတပါးက ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်နာတဲ့လေ .. ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတွေပါ စုံလို့ပါပဲ ..
ကလေးတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အလုံးစုံနီးပါးကို ဆရာတော်က ရရှိလာတဲ့ အလှူငွေတွေထဲကနေပြီး မျှတအောင် ဝေခြမ်းသုံးစွဲရပါတယ် .. အပြင်ထွက်ရမယ့် ၉တန်း ၁၀တန်း ကလေးတွေကိုလည်း လမ်းစရိတ် မုန့်ဖိုးက အစ ပေးရပါတယ် .. လိုအပ်လာတော့လည်း ဖြစ်အောင် လည်ပတ်ရတော့တာပါပဲ .. ကလေးတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာ စာတွေ ဖတ်ချင်ကြတယ် .. ကွန်ပျူတာတွေ ဘာသာစကားသင်တန်းတွေ တက်ချင်ကြတယ် .. သူတို့လေးတွေ တက်တက်ကြွကြွဖြေကြတော့ ၀မ်းလည်း ၀မ်းသာသလို မပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် .. ဒါပေမယ့် ခုချိန် ကလေးတွေမှာ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းတွေ သိပ်မပြည့်စုံသေးဘူး ဆိုပေမယ့် ပတ်ဝန်ကျင်က ပေးတဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့် သူတို့ဘ၀လေးတွေ လုံခြုံနွေးထွေးမှုတော့ ဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ် ..
ဒီစာကို လာဖတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း အဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းလေးကို အလည်သွားချင်ရင် သွားလို့ရအောင် လိပ်စာလေးထည့်ပေးထားပါမယ်နော် .. မဝေးတော့တဲ့ အချိန်မှာ ပန်းရောင်စုံတွေ အပြိုင်းအရိုင်း ဖူးပွင့်လန်းဆန်းလာတော့မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်နေပါတယ် .. ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွှေ့နိုင်ပါသည် ..း))
*ကျောင်းရဲ့ တည်နေရာ - ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အလယ်ရွာ (ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း)*
ကြည်နူးပျော်ရွှင် ရှိကြပါစေး)
ရေးသားသူ မိုးခါး at 5/19/2012 12:59:00 AM7comments:
အကြောင်းအရာခွဲ contribution, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, အတွေ့အကြုံ